Ku Noolow Waddooyin Caafimaad - Seattle Traffic
Kuma xirna si kastoo aad socdaasho West Seattle, waxey u badan tahay in qaar ka mida socdaallaada ay lugeyn, riixid gawaari gacan ama kuraasta lugaha leh. Waxanu gacan siineynaa dadka si nabad ah ku soconaya ama ordaya iyadoo qaar xaafadaha hadda jira waddooyinka cagaaran (waddooyinka la deggan yahay oo deggan) loo rogayo Ku Noolow Waddooyin Caafimaad.
Ku Noolow Waddooyin Caafimaad waxa laga xiray baabuurta – laakin aan ku jirin kuwa dadka deggan ama wax keenaya – 24 saac maalintii, 7 maalmood toddobaadkii (ilaa ogeysiin dambe). Yareyntan socodka baabuurta waxey waddooyinka ka yeeleysaa kuwo amaan u ah adiga si aad ugu lugeyso una sahmiso xaafadaha adigoo soconaya, ordaya, ama raacaya.
Raadi ay halka ay kaga yaalliin Ku Noolow Waddooyin Caafimaad xaafadaha West Seattle-Duwamish Valley.
Maabka Stay Healthy Street: High Point Map
Ku Noolow Waddooyin Caafimaad: Maabka Delridge/Highland Park
Ma Jeceshahay inaad ku raaxeysato faa’iidooyinka Ku Noolow Waddooyin Caafimaad ee Xaafaddaada?
Akhri tilmaamaheena soona codso ruqsadda Block ee Ku Noolow Caafimaad. Waxad dhowaan laga yaabaa inaad ku aragto waddooyinka la deggan yahay ee u dhow iskuullada oo loo rogo Ku Noolow Balook Caafimaad si loogu firaaqeeyo caruurta u lugeyneysa ama kaga soo laabaneysa iskuulaadka.